'हामी अहिले सबै मिलेर राप्रपा नै सोचिरहेका छौँ , प्रकाश जी मित्र हुनुहुन्छ, मित्रता कायम नै हुन्छ' : पशुपति शमशेर - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘हामी अहिले सबै मिलेर राप्रपा नै सोचिरहेका छौँ , प्रकाश जी मित्र हुनुहुन्छ, मित्रता कायम नै हुन्छ’ : पशुपति शमशेर
Posted by Headline Nepal | २४ जेष्ठ २०७४, बुधबार १८:१३ |
मुलुकले मंगलबार चालिस औँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार पाएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो तहको निर्वाचन हुनुपुर्व नै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले तोकिएकै समयमा दोस्रो तहको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीका साथ नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेका छन । यसैबीच सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागि हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने विषयमा केन्द्रित भई हामीले राप्रपाका वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर राणासँग राप्रपाको अबको तयारी र स्थानीय निर्वाचनमा कसरी केन्द्रित भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौँ ।
हेडलाईन नेपालले राप्रपाका वरिष्ठ नेता राणासँग गरेको कुराकानी :
मुलुकले ४० औँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पाएको छ । अब यो सरकारमा राप्रपा सहभागि हुन्छ कि हुन्न ?
– राप्रपाले यो सरकारलाई समर्थन गरेको छ । सोहि अनुरुप नै सरकारमा सहभागि हुन्छ ।
सरकारमा जानका निम्ति मन्त्रीहरु छान्ने विषयमा नेपाली काँग्रेस र राप्रपाबिच त्यस्तो केहि सहमति छ कि छैन ?
-सरकारमा सहभागि हुँदा एउटा जिम्मेवारी बोकेर जनताको सेवा गर्न खोज्नु स्वभाविक हो । त्यो नि गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा त सरकारलाई समर्थन हो ।
विगतदेखि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा आफ्नोे नेतृत्वमा सरकारमा जानुभएको हामीले पाएका छौँ । यसपटक चाहि अलिकति अभ्यास गर्दै विगतको भन्दा अलि पृथक विषयलाई आधार बनाई सरकारमा जाने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
– त्यो यहि गर्ने भन्ने ठेगान भैसकेको छैन। उहाँ जान पनि सक्नुहुन्छ र नजान पनि सक्नुहुन्छ । अध्यक्षको नेतृत्वमा जाँदा राम्रै हुन्छ । औपचारिक रुपमा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय भएको छैन ।
पशुपति शमशेर राणा वरिष्ठ नेता हुदा पनि प्रकाश चन्द्र लोहनीप्रति चाहिँ झुकाव कायम नै छ भन्ने बाहिर सुनिन्छ नि के भन्नुहुन्छ ?
– त्यो गलत हो । हामी अहिले सबै मिलेर राप्रपा नै सोचिरहेका छौँ । अन्य केहि सोचेकै छैन । प्रकाश जी मित्र हुनुहुन्छ । मित्रता कायम नै हुन्छ । पार्टीको ठाउँमा पार्टी हुन्छ, मित्रताको ठाउँमा मित्रता ।
राप्रपामा केहि विज्ञहरु केहि कुरामा असन्तुष्ट छ, फेरि पनि फुट्न सक्छ भन्ने नि सुनिन्छ, के छ अवस्था ?
– छैन, अहिले त्यस्तो केहि छैन । हामी मिलेर नै अघि बढेका छौँ । मिलेर नै अघि बढ्छौँ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनको मतपरिणामको तपाईँ आफ्नो तरिकाबाट समिक्षा गनुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
– यो परिणाम सुखःद कुनै हालतमा भएको छैन । यसको विश्लेषण, समिक्षा गरेर अबको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन हामी लागेका छौँ ।
राप्रपाले आफ्नो एजेण्डालाई बलियो रुपमा अगाडि बढाउनका निम्ति के गनुपर्ला ?
– अब यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा त सम्भव छैन । हामीले पुनर्विचार गनुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा त चिह्न नै हो । गाई चिह्नले त्यति राम्रो गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले हलो चिह्नमा नै हामी फर्कनुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि राम्रा उमेद्वारको सम्भावनाको लागि तपाईहरुले कसरी तयारी गर्दैहुनुहुन्छ ? तालमेल पनि गर्नुहुन्छ कि?
– त्यो के गर्ने भन्ने जिम्माहामीले स्थानीय नेतृत्वलाई नै छाडिदिन्छौँ । केन्द्रबाट गरिएको तालमेलले हामीलाई सबैठाउँमा राम्रो गर्न सकेन । त्यसैले ।
अहिलेको स्थितीमा पशुपति शमशेर राणा र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा बिचको विषयलाई लिएर कहिलेकाहिँ टिकाटिप्पणी आउँछ, के भन्नुहुन्छ ?
– छैन, हाम्रो सम्बन्धमा त्यस्तो केहि समस्या छैन । हामी मिलेर नै बसेका छौँ । चिन्ताको विषय छैन ।
पार्टीलाई थप बलियो बनाउनका निम्ति कुनै योजना बनाउनुभएको छ ?
– हाम्रो मुख्य काम भनेको संगठनलाई बलियो बनाउनु हो । संगठनलाई बलियो बनाउन अघि बढ्यौ भने अहिले आईपरेका समस्याहरु हल हुन्छन् ।
Previousकाठमाडौंबाट ट्रान्जिट हुँदै दोहा जाने हवाई टिकट बन्द
Next‘सुरक्षा निकायको ‘चेन अफ कमाण्ड’ सुदृढ गर्छौँ’ : गृहमन्त्री शर्मा
स्थानीय निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली आज टुंगो लाग्ने ! १ करोड ४० लाख भन्दा बढि मतदाता हुने अनुमान
२० चैत्र २०७३, आईतवार ०९:१४
बारामा बस दुर्घटना, दुईको मृत्यु
६ जेष्ठ २०७४, शनिबार १२:१६
आगो लगाएर श्रीमानको हत्या !
७ कार्तिक २०७४, मंगलवार १४:०१
तेह्रथुमकै पहिलो ठूलो खोरुंगाखोला जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु
२० माघ २०७३, बिहीबार १०:५८